Ingcindezi Yesifo Sikashukela > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Ngokwezibalo, umfutho wegazi ophakeme kusifo sikashukela sikhuphuka ngezikhathi ezingama-3-5 amathuba okuba nesifo senhliziyo esibulalayo, ngezikhathi ezi-3 kuya kwezi-4- ukuhlaselwa yisifo sohlangothi, kuze kube izikhathi ezingama-25- ukwehluleka kwezinso. Kuze kube yizikhathi ezingama-20 amathuba wokulahleka kombono, ukuthuthukiswa kwe-gangrene kanye nesidingo sokunqunywa. Umfutho wegazi ophansi ezigulini ezinodidi 1 nohlobo 2 sikashukela kukhipha indlala ye-oxygen yezicubu nokufa kwazo okulandelayo.
Kubalulekile ukuthi abanesifo sikashukela balawule umfutho wegazi kanye namazinga kashukela.
Ushukela uncishiswa ngaso leso sikhathi! Isifo sikashukela ngokuhamba kwesikhathi singasiholela esixukwini sonke sezifo, njengezinkinga zokubuka, izimo zesikhumba nezinwele, izilonda, i-gangrene kanye namaqhubu omdlavuza! Abantu bafundisa okuhlangenwe nakho okumunyu ukuguqula amazinga abo kashukela abe ngokwejwayelekile. funda uqhubeke.
Ukubaluleka kokulawula umfutho wegazi kushukela
Ukulawulwa kwengcindezi yegazi kuyadingeka ukuvikela izinkinga eziningi. Ngokuya ngenkomba yokucindezela, kukhula i-pathology eyodwa noma enye. Ngenxa yokwanda kwengcindezi yegazi, umthwalo emikhunjini ethintwa yisifo sikashukela uyakhuphuka, ngenxa yokuthi lokhu kuba nezinkinga ezilandelayo:
ukuncipha okubonakalayo, ubumpumputhe,
wehlise ithoni ye-vascular, isifo sokuqina kwemizwa,
isifo senhliziyo, isifo senhliziyo,
Ukucindezela okwehlisiwe ngemuva kwesifo sikashukela kuwuphawu lwabesifazane. I-Pathology ithathwa njengeyingozi kakhulu kune-hypertension, ngoba kunzima ukuyilungisa. Ukunikezwa kwegazi okubuthakathaka ekucindezelweni okuncishisiwe kuholela ekubulambeni i-oksijini yazo zonke izicubu zomzimba, futhi ngokuzayo - ekufeni kwabo. Ngenxa yalokhu, kuba nezinkinga ezilandelayo:
amanxeba wesikhumba angapholi,
ukushaya kwenhliziyo, ukuhlaselwa yisifo sohlangothi,
unyawo lwesifo sikashukela.
Kukhona ubudlelwano phakathi kwamazinga kashukela nezimo zemithambo yegazi. Ushukela uthinta kabi zonke izitho futhi uthinta izindonga zemithambo yegazi. Izinga eliphakeme le-insulin lenza igazi likhulu, okuthinta umfutho wegazi. Uma abanesifo sikashukela benyusa umfutho wegazi, i-vasoconstriction icasulisa ukunqwabelana kwamanzi nesodium emzimbeni, yingakho umfutho wegazi ophakeme ungamahlalakhona. Ukwehlisela umfutho wegazi kufinyelela kwelitshe (eliphephile) kubalulekile.
Imbangela yomfutho wegazi ophakeme ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo lokuqala ngumsebenzi wezinso ophazamisekile, okuyisimpawu “sesifo esimnandi”. Endabeni yesifo sikashukela sohlobo 2, umfutho wegazi ungakhuphuka ngaphambi kokwehluleka kwe-metabolic. Eqinisweni, i-hypertension yandulela noma ihambisana nesifo sikashukela. Izici ezilandelayo zingaphakamisa umfutho wegazi:
ukuntuleka kwezinto zokulandela emzimbeni,
ukulimaza umzimba ngezinto ezinobuthi,
okokuhlangana okubonakalayo kohlelo lwe-endocrine,
Ukuntuleka komoya ephusheni (ukujula),
isifo sokuqina kwemizwa.
I-60% yabantu abanesifo sikashukela bahlushwa umfutho wegazi ophakeme.
Isiguli kwesinye isikhathi sifunda ukuthi izinga lokucindezela kwegazi likhuphuke ngengozi, ngesikhathi sokuhlolwa okujwayelekile, ngoba ezimweni eziningi lesi sifo siqhubeka ngaphandle kwezimpawu, ngoba umfutho wegazi uphakamisa izici eziningi, akuvamile njalo ukuthola ukushuba, isikhathi se-pathology, kanye nesilinganiso saso imiphumela emzimbeni. Imvamisa, lapho kungekho zimpawu ezingemnandi, iziguli zilukaza ukuhlolwa nokwelashwa. Kwesinye isikhathi, ngokucindezela okukhulayo, isiguli sikhononda ngalezi zimpawu ezilandelayo:
kwehlise ukuqina kokubonakalayo.
Umfutho wegazi ophezulu wesifo sikashukela usongela ukuthuthukiswa kwezifo ezikhona, ukukhubazeka nokufa. Umfutho wegazi okhuphukayo kufanele uncishiswe ukuze inkomba yawo ithole inani eliqondisiwe. Umfutho wegazi okuqondisiwe wesifo sikashukela ngu-130/80 mm Hg. Ubuciko. Ngemuva kokuthola ukunyuka kwengcindezi yegazi ngokwakho, akukho ongakwenza ngaphandle kokubonana nodokotela kuqala, bese uphuza amaphilisi wehlisela ingcindezi ngaphandle kokuqokwa. Ukwehlisa ingcindezi, udokotela ubeka lezi zindlela zokwelashwa ezilandelayo:
Ukwelashwa kwezidakamizwa. Isiguli sinqunywe umuthi okwehlisa umfutho wegazi. Ngokuvamile, kusetshenziswa ama-inhibitors e-ACE, okuthi, ngaphezu kokuqinisa umfutho wegazi, kuvimbele ukulimala kwezinso, kanye ne-diuretics. Izibhebhe ezinqunyelwe kufanele zithathwe ngemithamo echazwe ngokuqinile.
Ukuqedwa ngokweqile. Uma wehlisa isisindo somzimba nge-5%, kukhona ukuthuthuka okubonakalayo esimweni esivamile sesiguli nakwisifo sikashukela.
Ukudla Akunakwenzeka ukwehlisa umfutho wegazi ngaphandle kokubambelela ekudleni okungenawo usawoti. Ukwehlisa ngempumelelo ingcindezi, kufanele wenqabe ukufaka usawoti ekudleni, ngoba usawoti utholakala cishe kuyo yonke imikhiqizo yokudla.
Indlela yokuphila esebenzayo. Ukuzivocavoca umzimba kunganciphisa ushukela wegazi futhi kunomthelela omuhle esizweni semithambo yegazi.
Ukucindezela okuphansi kubalulekile futhi ukwandisa, kanye nokuphakama okuphezulu. Lapho umuntu onesifo sikashukela eyehla ngomfutho wegazi, ukunikezwa kwegazi kumaseli kuncipha, futhi ngomonakalo we-vascular, kungahle kungabikho kwezinye izingxenye zomzimba. Lokhu kubangela izingqinamba ezinkulu ezingadala ukukhubazeka. Umfutho wegazi kufanele ubhekwe kaningi njengokuthatha isivivinyo sikashukela wegazi.
Kungani ingcindezi iyehla?
Uma umuntu enokukhathala okungapheli, i-hypotension iba khona. Ngendlela efanayo, isimo sengqondo sithinta izinga lokucindezela. Umfutho wegazi wehlisela isikhathi eside ukucindezeleka nezimo ezicindezelayo ezivame kakhulu. Ngaphezu kwalokho, i-hypotension ngemuva kweshukela likhula ngenxa yezici ezilandelayo:
Izifo ezizalwe kabusha zesistimu yezinzwa,
ukusetshenziswa isikhathi eside kwezidakamizwa ezinamandla
ithoni emsipha engenamandla,
isigaba esibuhlungu sesilonda esiswini,
ukuguquka kwesimo sezulu, ushintsho olubi ezimweni zezulu.
I-Hypotension ngokumelene nesizinda sesifo sikashukela iba ngenxa yendlela engafanele, ngakho-ke ngeke sikwazi ukuqeda i-pathology ngosizo lwemithi.
Umfutho wegazi ophansi, kanye nomfutho wegazi ophakeme, ukhula ngaphandle kwezimpawu eziphawuliwe. Kulokhu, isiguli singase siqaphele lezi zimpawu ezilandelayo ze-pathology:
ubuthakathaka obujwayelekile, ukozela,
shintsha inhlala-kahle ngokuya ngezimo zezulu.
Ukwelashwa komfutho wegazi ophansi kufanele kube ngaphansi kokuqashwa kwe-endocrinologist. Ukwenza isimo sibe ngokwejwayelekile, okokuqala, kufanele ulungise indlela ohila ngayo, ungagijimeli ukuphuza amaphilisi anciphisa umfutho wegazi, ngaphandle komyalo kadokotela. Imithi ye-hypotension ingakhuphula umfutho wegazi isikhashana. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa ukumnika kwe-Eleutherococcus noma impande ye-ginseng. Ngokuvamile, ukushintshwa kwezinga lokucindezela kuya ngesimo somzimba jikelele. Nge-hypotension ngemuva kweshukela, kunconywa:
geza umehluko ekuseni,
yenza ukugcotshwa kwezitho zomzimba nezomzimba wonke.
Ukuvimbela ingcindezi ehlukile ezigulini ezinesifo sikashukela
Ukwanda noma ukuncipha kwengcindezi yegazi kuyindlela eyingozi esehlisa ikhwalithi yempilo. Uma lesi sifo sikhula nesifo sikashukela, amathuba okuba nezinkinga ezinkulu anda. Ngakho-ke, kubalulekile ukuvimbela ukwephulwa komfutho wegazi kushukela. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuhola impilo enempilo. I-Hypertension ivame ukwenzeka ngaphambi kokuqalwa kwesifo sikashukela i-mellitus, ngakho-ke, izondlamzimba kanye nokuzivocavoca umzimba kufanele kubhekwe njalo.
Umthetho oyinhloko wokuvimbela ukuthuthukiswa kwezinkinga kushukela, kufaka phakathi igxuma ekucindezelweni kwegazi, ukubheka ushukela wegazi njalo. Ukwanda kwe-glucose kuthinta kabi isimo semithambo yegazi, okuholela ekuphazamisweni kwegazi. Ukufaka ushukela ejwayelekile ngokudla, ukuvivinya umzimba, nemithi enqunyelwe kungadambisa ushukela futhi kuvikele ukuncipha noma ukwanda kwengcindezi.
Isifo sikashukela - kuyini?
Isimo se-pathological esibonakala ngokushintshwa kwamapharamitha we-metabolic nge-syntulin enganele ye-insulin itholakala njengesifo sikashukela i-mellitus. Lesi sifo sinendlela evilaphayo, evikelekile, lapho kubhekelwa khona ukwakhiwa kwezinkinga eziningi, esinye sazo okunguguquko kwinethiwekhi yamasipha nokwakheka kwegazi.
Ukucindezela kwe-stter ye-arterial kukalwa ku-mmHg futhi inquma amandla omjelo wegazi odonswa ngawo nge-vasculature, okungukuthi:
okujwayelekile kumelela inani lokulinganiselwa kwengcindezi ngesikhathi se-systole (ukuzikiswa kwezicubu zenhliziyo) kanye ne-diastole (ukuphumula kwayo), okuyisayizi ka-110/70,
ngokushintshashintsha kwamandla embuthanweni ongaphezulu we-systolic ebangeni lamayunithi angama-20 kusuka kokujwayelekile (90-130),
kanye nezinga eliphansi le-diastolic lika-10 (60-80) kunoma iyiphi indlela isichazwe kakade njengokuphambuka kwe-pathological.
Lapho umkhawulo onemibandela wesimo esikhona sokucindezelwa kwemithambo weqiwe, umfutho wegazi ophakeme uyakhula, ngokuncipha kwawo - umfutho wegazi.
Umgomo wokuthuthukiswa kokuphazamiseka kwemithambo yegazi
Isakhiwo sokuthuthukiswa kwezinguquko embundwini wokucindezela kwegazi ku-mellitus yesifo sikashukela ngokuqondile kuya ngesimo senkambo yesifo, esingahle sibe nohlobo loku-1 noma 2 lwentuthuko yenqubo ye-pathological. Inamapharamitha alandelayo:
Umfutho wegazi ophakeme Ngokuphula izinqubo ze-metabolic, ukwanda kokuhlushwa kwe-insulin egazini kunqunywe. Ushintsho ekwakhekeni kwegazi okungokwemvelo kuholela ekunciphiseni i-lumen ye-vascular. Ngaphezu kwalokho, umzimba uqala ukugcina ukuvela kwamanzi kanye nosawoti wamaminerali ngaphakathi kohlelo. Lezi zimpawu ziwuphawu lomfutho wegazi ophakeme ophakeme kunethiwekhi yemithambo yegazi.
I-Hypotension. Kaningi lesi simo sitholakala kubantu besifazane, ngoba siyingozi eyingozi kakhulu ephathelene ne-hypertension. Njengomphumela wengcindezi enganele, igazi ligobhoza kancane kakhulu kwizakhi zangaphakathi emzimbeni, okuholela ekubulalekeni kwe-oksijini kanye nokufa kwasendaweni kwezicubu namaseli.
Kukuziphi izimo lapho ingozi yezinkinga ze-hypertension inyuka?
Ingcindezi eyandayo yohlobo lweshukela sikashukela ezimweni eziningi icasulwa ngokumelene nesizinda sokulimala kwezicubu zomzimba ngomsebenzi wokuchama okungalungile. Ngesifo sohlobo 2, iziguli ezinesimo esinqunyelwe kulezi zimo ezilandelayo zihlukaniswa njengeqembu lengozi:
ukweqisa ngokweqile kwengqondo-ngokomzwelo,
amapharamitha wesisindo ngokweqile
ukuntuleka kokudla okunempilo
ukwephulwa okuqhubekayo kwamathoni okuphefumula esikhathini sokulala,
ushintsho emsebenzini wezinzwa, i-pathology yezinso, isifo sokuqina kwemizwa, njll.
I-Hypertension ithambekele enkambweni ye-asymptomatic, okuholela ekubonakalisweni kwemiphumela emibi yenqubo ye-pathological. Ukuba nesisekelo se-vascular, kufaka phakathi ukulimala kwephethini lomchamo nesitho esibonakalayo. Izizathu ezivusa ukuthuthukiswa komfutho wegazi ophakeme nazo ziba yimiphumela yesifo, ngoba izinga eliphakeme lokucindezelwa kwemithambo lithinta isimo sezindonga zemikhumbi, okuholela ekuphambukeni kokuguquguquka kwe-pathological kumapharamitha ayo.
Izinkinga eziba khona ngemuva kwesizinda sefomu elizinzileyo lokucindezelwa kwemithambo kufaka phakathi ukuphazamiseka kwezifo ezilandelayo:
isifo senhliziyo se-ischemic,
ukuhlaselwa yisifo sohlangothi nokushaya kwenhliziyo,
ukulimala kwezinso ngenxa yesifo sikashukela esikhona,
ukonakala okubukhali emsebenzini wokubonakalayo.
Ivela nini i-vascular hypotension?
Umfutho wegazi ophansi kushukela unezinga elithile lobungozi emzimbeni, okubonisa ukushoda okubonakalayo kwamangqamuzana nezicubu ezakhiweni zomzimba nomoya-mpilo. Izici ezibikezela ukubonakala kwezinga lokunganakwa kwengcindezi yemithambo yilezi zinhlaka ezilandelayo:
ukuphazamiseka kwezakhi zofuzo emsebenzini wezinzwa,
i-pathology yomsebenzi wenhliziyo,
wehlise ithoni ye-vascular,
isigaba sokwanda kwesilonda esiswini,
ukuncika kwesimo sezulu nokukhathala okungapheli.
Izinkinga ze-hypotension kushukela sibandakanya ukuthuthukiswa kokulimala kwesilonda se-peptic, unhlangothi kanye nokushaya kwenhliziyo, i-thrombosis kanye ne-gangrene yemikhawulo.
Yini okufanele uyenze lapho wembula i-vascular pathology?
Umgomo wezinyathelo zokwelapha, ezisetshenziswa ngokuya ngemiphumela yokuxilongwa kwengcindezi ephezulu yesifo sikashukela, kufaka phakathi ukusetshenziswa kwalezi zinyathelo ezilandelayo:
ukuzinza ushukela egazini, okunomphumela omuhle wokuguqulwa kokudla okukhona ngaphandle kokudla okunenkomba ye-glycemic ephezulu,
imikhawulo ephelele kasawoti nokudla nokuqukethwe kwayo okuphezulu,
ukulungiswa kwamapharamitha wesisindo somzimba, okuthi, lapho ancishisiwe, kuthinte kakhulu izinkomba zokucindezela kwinethiwekhi yemithambo, kunciphisa ngempumelelo,
ukwelashwa okufanele kwezidakamizwa ngaphansi kokuqashwa njalo kwemingcele yokucindezela kwe-vascular, okubandakanya ukusetshenziswa kwe-ACE inhibitors: i-Captopril, i-Enam, iKapoten, iLisinopril, njll.
ukusetshenziswa kokugaya, izidakamizwa ezinomphumela wokugaya, lapho zithathwa, kukhipha uketshezi olwedlulele emzimbeni, ngaleyo ndlela kwenziwe kube yingcindezi ingcindezi kwinethiwekhi yemithambo.
Umfutho wegazi ophansi kushukela lilungiswa ngemuva kokuxilongwa kahle kwesimo sesiguli ngaphansi kokulawulwa okuqinile kwenkomba kashukela wegazi. Umphumela ekuvumelaneni kokucindezelwa kwemithambo wegazi wenziwa ngama-tonic agents ahamba kahle ngokusetshenziswa kwamakhambi kanye ne-infusions. Leli qembu linabamele ababalulekile abalandelayo:
Eleanuelococcus, Leuzea, Ginseng,
Itiye eliluhlaza ngejusi kalamula, njll.
Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukuthola nokulungisa amaphutha kwindlela yokuphila nokudla, ukuqinisekisa isikhathi sokulala ngokugcwele, uphuze isilinganiso esanele soketshezi nsuku zonke, wenze inhlanganisela yasekuseni yokuzivocavoca umzimba, ophela ngokuthatha ishawa elinomthelela wokushisa oguquguqukayo wamanzi emzimbeni.
Uhlaka lwesidingo sokuqapha eduze kwengcindezi yegazi kushukela
Kusungulwe cishe ukuthi ushintsho ekucindezelweni kwemithambo phezulu kububanzi obungasho lutho njengoba amayunithi ama-5 enyusa amathuba wokuthuthukisa i-ischemia yenhliziyo ngamaphesenti angu-25, kanye ne-pathology yokuhlinzekelwa kwegazi lokubeletha ngo-40%. Ezigulini ezi-hypotensive, ukukhubazeka kwangaphambi kwesikhathi kubonakala kunomphumela obulalayo wokulwa nesizinda sezinkinga ezibangelwa imithambo yegazi ephazamisekile kanye nokudla kwezicubu.
Ukuxilongwa ngokuhlangana kwengcindezi ku-mellitus yesifo sikashukela kungaholela ekwakhiweni kwalezi zinhlobo ze-pathologies njengokunciphisa izinga lokubona okubonakalayo ukuqeda ukungaboni, ukwehluleka kwezinso, unyawo lwesifo sikashukela, ukushaya kwenhliziyo, i-gangrene. Kulokhu, esigulini esinomlando wesifo sikashukela, ukubhekwa njalo kwengcindezi ye-vascular kubaluleke kakhulu, ukwethula umsebenzi obaluleke ngokulinganayo ukuwenza kube ngokwejwayelekile, kanye nokuncishiselwa kwezinguquko ezinqubweni ze-metabolic. Ngakho-ke, imisebenzi yokwelapha efakwe kuhlu isetshenziswa ngokubambisana.
Izimbangela zokuthuthuka kanye nobudlelwano be-pathologies
Izici ezilandelayo ezidala isifo sikashukela sohlobo 2 nomfutho wegazi ophakeme zihlukaniswa:
ukusebenza ngokomzimba ngokweqile noma okunganele,
ingcindezi engapheli kanye nokuxineka,
ukuhlinzwa kohlelo lokugaya,
Umfutho wegazi ophezulu ngohlobo 2 sikashukela uboniswa yizimpawu ezinjalo:
Ukuqapha ushukela wegazi kumele ube yisifo sikashukela.
IGlucose iqoqa futhi ihehe amanzi. Amavolumu uketshezi oludliwe luyanda, ukuchama kuba njalo, izinso ziyahlupheka futhi nomfutho wegazi uyenyuka.
Ukwehla kwesisindo. Ku-diabetes, i-insulin ikhiqizwa ngamanani anganele, kukhona ukwephulwa kokuthathwa koshukela bese ngenxa yalokho, amandla endlala amangqamuzana.
Ukuphola amanxeba isikhathi eside. Ushukela ngokweqile uqinisa igazi, emva kwalokho iba ngumonakalo wezinzwa eziwubala noshukela.
Ukuzizwa womile. I-glucose ibamba umswakama, izicubu namaseli kushoda uketshezi. Isiguli sihlala siphuza amanzi.
Ubuhlungu bekhanda, ubuthakathaka.
Kungani ingcindezi ingakhuphuka?
Imiphumela yalezi zinto ezilandelayo ikhulisa ingcindezi:
Ukudla okunganele koketshezi. Lapho izinga likashukela likhuphuka, igazi liba ngaphezulu kwe-viscous, iziguli ziphuza kakhulu, okuholela ekutheni umsebenzi wenhliziyo ukhuphuke futhi umfutho wegazi ukhuphuka.
I-cholesterol ephezulu. Le nto ifakwa ezindongeni zemithambo yegazi ngendlela yamachaphaza, athinta kabi i-myocardium.
Shintsha ekunikezelweni kwamaprotheni. Izinga eliphakeme liholela ekuqineni kwegazi kanye noshukela, okungakhulisa ingcindezi.
Adrenaline. Ngaphansi kwethonya le-hormone, izitsha zincanyana nomthwalo osenhliziyweni uyanda. Ukukhiqizwa kwe-adrenaline kwenzeka ngesikhathi sokuxineka, ukwethuka okungokomzwelo, okuyingozi kumfutho wegazi futhi kungani umfutho wegazi ungakhuphuka.
Isifo sezinso. Ukwehluleka kwangempela, i-glomerulonephritis, i-pyelonephritis kungadala umfutho wegazi ophakeme.
Ngabe udinga ukulawulwa kwengcindezi yegazi?
Kwabanesifo sikashukela, inkinga yokulawulwa kwengcindezi ibaluleke kakhulu kunezinye iziguli. Lokhu kungenxa yokuthi akuzona zonke izidakamizwa ezingafakwa ekwelapheni umfutho wegazi ophakeme. Ukunyuka okungazelelwe kweglucose kungadala ukwanda kwengcindezi yegazi, ngakho-ke kubalulekile ukuthi kwabanesifo sikashukela babheke ushintsho lwezinkomba. Ukucindezela okuhle kubhekwe ngaphakathi kwe-120 / 80-130 / 85 mm Hg. Ubuciko, nokujwayelekile - kufika ku-140/90. Umfutho wegazi ophakeme nesifo sikashukela kuxhunywa izitho ezifanayo ezihlosiwe: ubuchopho, inhliziyo, izinso namehlo. I-Hypertension inomphumela ongemuhle kwezicubu zemizwa, okuholela ekwakhiweni kwe-neuropathy yesifo sikashukela.
Ukuze uvikele ukuvela kwenkinga ye-hypertensive, engadala ukushaya kwenhliziyo noma unhlangothi, kubalulekile ukulawula umfutho wegazi usuku lonke.
Umfutho wegazi ophezulu kushukela kudinga ukuxilongwa okuphelele. Udokotela ngemuva kokuhlola futhi aqoqe ama-anamnesis anquma imbangela, okuvusa umfutho. Izici eziyinhloko zokuxilongwa:
Ihlola umfutho wegazi. Ungazilinganisa izinkomba ekhaya noma esibhedlela, lapho kusetshenziswa indlela yokuqapha yansuku zonke kakhulu. Kusetshenziselwa isiguli idivaysi ekhethekile, ethi izikhathi eziningana ngosuku ilinganise ukuthi umfutho wegazi usuvukile kangakanani. Udokotela ulandelela amandla ashukumisayo. Umfutho wegazi ophansi ufundwa indlela efanayo.
Ukuhlolwa kwelabhoratri kwegazi nomchamo. Lapho kukhuphuka umfutho wegazi wesiguli, kukhuphuka inani lamaprotheni emchameni.
Ukuhlola ukusebenza kwezitho zangaphakathi. Lolu cwaningo lubandakanya i-ECG ne-echocardiography, iDoppler ne-arteriography, i-ultrasound yezinso nezindlala ze-adrenal.
Ukuxilongwa kwe-fundus. Amehlo ayisitho esihlosiwe esivame ukuthintwa yingcindezi ephezulu.
Indlela yokwelapha umfutho wegazi kushukela?
Imithi yokwelapha umfutho wegazi ophezulu ihlukaniswe ngamaqembu amaningi, ngalinye linezinkomba zalo zokuthola umuthi. Kubalulekile ukunamathela kuzo zonke izincomo zikadokotela zokuzinzisa umfutho wegazi ophakeme futhi uvikele nezinkinga kwisifo sikashukela. Ukwelashwa okungeyona yezidakamizwa kufaka nokugcina impilo enempilo nokubhekisisa izondlamzimba. Ekwelapheni umfutho wegazi ophakeme, kulinganiswa okujwayelekile kwezinkomba nge-tonometer kanye nama-ejenti wokuhlanganisa agcina umfutho wegazi ezingeni elifanele. Thatha amaphilisi okucindezela ushukela ngokuya ngemiyalo.
Izidakamizwa ukusiza ukwehlisa umfutho wegazi lakho
Kungcono ukungathembeli ukukhethwa kwemithi ekuncomeni kwabangane nakubantu obajwayele. Umuthi ukhethiwe esigulini ngasinye ngamunye, kucatshangelwa izinkomba zokucindezelwa kwegazi, ubudala, i-pathologies eyenzeka kanye nezinye izinto. Noma kungingcindezi ephansi noma ephezulu, udokotela ukhetha umuthi omuhle kakhulu wengcindezi esekelwe ohlolweni. Ngokubheka i-mellitus yesifo sikashukela, la maqembu alandelayo wezidakamizwa anomfutho wegazi ophakeme anconyiwe:
Ukusetshenziswa kwezindlela zokupheka zesifo somfutho wegazi ophezulu kanye noshukela kungenzeka kuphela ngemvume kadokotela. Uma ezinye izinto zithinta kahle ukuncipha kwengcindezi, khona-ke ngasikhathi sinye zingakhuphula ukugcwala kweglucose. Izindlela zokupheka zomphilisi zemvelo zingeza ekwelapheni okuyinhloko. Ngakho-ke, uma kunesidingo, udokotela uqobo uzokweluleka ukuthi uphuze ama-decoctions awusizo kanye nama-tinctures. Ochwepheshe abaningi batusa ukusebenzisa i-decoction ye-rose rose, i-hawthorn, i-valerian, i-mamawort ukunciphisa ingcindezi. I-Hypertension kanye nesifo sikashukela kulawulwa ngempumelelo yimbewu yefilakisi.
Akuyona ingozi kangako i-hypotension. Ngomfutho oncishisiwe, ukulethwa komoya-mpilo kanye nezakhi emangqamuzaneni kuyehla bese bafa.
Ukudla kwesifo segazi
Ukuze ungafaki ushintsho olungazelelwe izinkomba ze-glucose ekucindezelweni okuphezulu, udinga ukulandela le mithetho lapho wenza imenyu:
Ukudla okunamafutha ngale nhlanganisela yezifo kuyaphikiswa.
Yehlisa ukudla usawoti. Usuku akumelwe luqedwe kungadluli ku-6 g.
Yidla amafutha amancane ezilwane. Ukudla okunamafutha amaningi kushukumisa ukwakheka kwama-cholesterol plaque, inzuzo yesisindo, okuthinta ukwanda kwengcindezi yegazi futhi kuthinta noshukela.
Phuza ngesizotha ikhofi eqinile, itiye. Itiye neziphuzo zekhofi zandisa umthwalo enhliziyweni.
Khipha ngokuphelele uphuzo oludakayo. I-Alcohol iyimbangela ye-vasospasm.
Faka phakathi ukudla okuphezulu ku-magnesium ne-potassium ekudleni kwakho. Lezi zinto zitholakala kubhanana, ama-apricots omisiwe, isipinashi, omisiwe, ubisi, amazambane, i-buckwheat, ama-hazelnuts.
Ezinye izindlela zokubhekana nengcindezi
Ukuvimbela ukuthuthukiswa kwezinkinga ezinzima ze-hypertension kanye nesifo sikashukela, udinga ukulandela indlela yokuphila enempilo. Ngeke kwenzeke ukwelapha ngokuphelele i-pathology, kepha kungenzeka ukwenza lula impilo yeziguli. Kudlalelwa izidakamizwa njalo, hhayi kuphela lapho kunezinkinga ezinkulu zegazi. Kunconywa ukuthi uyeke ukubhema futhi uqede ukusetshenziswa kotshwala. Ukudla okufanele nokulinganiselayo kuthinta hhayi kuphela ukugcinwa kwesisindo esijwayelekile, kepha futhi nokulawulwa kwe-glucose yegazi kanye nokuqina kwengcindezi yegazi. Ukuzivocavoca umzimba kuzothuthukisa ukuhamba kwegazi futhi kubuyise ukusebenza komzimba.
Umfutho wegazi kanye nomfutho wegazi ophakeme
Umfutho wegazi ophakeme - Isifo sohlelo lokuthinteka kwenhliziyo, esibonakala ngomfutho wegazi ophakeme, ezimweni eziningi sihambisana nesifo sikashukela. Ngokuvamile, abantu asebekhulile nabanokweqile banomfutho wegazi ophakeme. Kulesi sigaba sabantu, ukuhlola umfutho wegazi kubaluleke kakhulu njengokuhlola ushukela, futhi kufanele kwenziwe kaningi ngosuku ukubheka ukusebenza kwezidakamizwa ze-antihypertensive.
Inhliziyo esebenza njengepampu ipompa igazi, ilinika zonke izitho zomuntu. Njengoba inhliziyo isivumelana, umjelo wegazi ungena emithanjeni yegazi, ubangele ingcindezi ebizwa phezulu, futhi ngesikhathi sokukhula noma ukuphumula kwenhliziyo, kufakwa ingcindezi encane emithanjeni yegazi, ebizwa phansi.
Umfutho wegazi ojwayelekile womuntu ophile kahle (olinganiselwa ku-mmHg) ubhekwa njengento ebanga ukusuka ku-100/70 kuye ku-130/80, lapho idijithi yokuqala ingcindezi ephezulu, kanti eyesibili kuyinani lokucindezela eliphansi.
Indlela emnene yomfutho wegazi ophakeme ibonakala ngokwanda kwengcindezi engenhla kwe-160/1100, ingcindezi emaphakathi kusuka ku-160/11 kuye ku-180/1010, ifomu elinzima lingakhuphuka ngaphezulu kwe-210/120.
Izifundo ezibeka izinga lokucindezela kwegazi kushukela
Izifundo ezintathu ezenziwayo ngokuya ngemithetho yemithi esekelwe ebufakazini, ebekelwe ukunquma izinga lokucindezela kwegazi kushukela, lapho ubungozi bezinkinga zemithambo lincane khona: i-UKPDS, i-ABCD kanye nokungafundwa.
Ucwaningo lwe-UKPDS luchazwe ngemininingwane engenhla. Lolu cwaningo lwaqala ngonyaka we-1977, lapho amanani angadluli ku-150/85 mm Hg athathwa njengezinga lokucindezela kwegazi. Ubuciko. Kulolu cwaningo, kufakazelwe ukuthi ukwehla kwe-SBP ngu-10 mmHg. Ubuciko. kanye ne-DBP ku-5 mm RT. Ubuciko. kunciphisa ubungozi bokuqhekeka kwe-myocardial ngo-21%, nokushaywa yi-44%.
Ucwaningo lwe-ABCD luhlanganisa neziguli ezingama-470 ezinesifo sikashukela sohlobo 2 futhi zahlelwa ezinhlangothini ezimbili. Eyokuqala kwakuwukuthola inani eliphezulu lomfutho wegazi lapho ingozi yezinkinga zenhliziyo incane (i-ABCD-HT), okwesibili ukuthola izinga lomfutho wegazi lapho ingozi yokuhluleka kwenhliziyo incane khona (i-ABCD-NT). Esiqondisweni sokuqala, izinga lomfutho wegazi elingu-132/78 mm Hg latholakala ngokwesilinganiso. Ubuciko., Ngolwesibili - 128/75 mm RT. Ubuciko. Eqenjini lokuqhathanisa (lapho kwenziwa khona ukwelashwa okungaxineki kwe-antihypertensive), izinga lomfutho wegazi lifinyelelwe ku-138/86 mm Hg. Ubuciko. (kulokhu, Izinga le-DBP alizange lidlule ku-89 mm Hg). Ngemuva kweminyaka engu-5 yokulandelwa, akukho mehluko omkhulu owatholakala phakathi kwamaqembu ngokuya ngengozi ye-UIA, DR ne-neuropathy. Kodwa-ke, ukubulawa kwabantu okuphelele eqenjini lokulawula kakhulu umfutho wegazi bekuphindwe izikhathi ezi-2 (5.5%) kuqhathaniswa neqembu lokulawula ngokulingana kwengcindezi yegazi (10,7%). Ngaphezu kwalokho, imvamisa yokushaywa kweqembu le-ABCD-NT yehle kakhulu.
Ucwaningo lwe-Hypertension Optimal Treatment luhleliwe lweziguli eziyi-1501 ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-2. Iziguli zahlukaniswa zaba ngamaqembu ama-3, ngokuya ngomsebenzi wokufinyelela ezingeni le-DBP.
Injongo enkulu ekwelashweni kweziguli ezinesifo sikashukela ukuvimbela ukuthi kungenzeka ukuthuthuka noma ukuqhubekela phambili ngokushesha kwezinkinga zomzimba ezibonakala kulesisifo (DN, DR, ukulimala kwemithambo yenhliziyo, ubuchopho neminye imithambo emikhulu emikhulu). Akungatshazwa ukuthi imbangela ehamba phambili iyaboniswa.
I-Adducins ngamaprotheni we-cytoskeleton yeseli. Kucatshangwa ukuthi, ngakolunye uhlangothi, ama-adductin adlulisela amasiginali ngaphakathi esitokisini, ngakolunye uhlangothi, ekusebenzisaneni namanye amaprotheni we-cytoskeletal, athumela ama-ion ngokusebenzisa ulwelwesi lweseli. Ebantwini, wonke ama-aducin akhiwa amahlandla amabili.
Umfutho wegazi ulinganiswa ngedivayisi ekhethekile - i-tonometer, ethengiswa kunoma yisiphi isitolo sezidakamizwa. Ngokomgomo wokusebenza, ama-tonometer ahlukaniswe:
Ukulinganiswa kwengcindezelo ebanjelwa,
Kungakhathalekile imodeli, into ephoqelekile yanoma iyiphi i-tonometer iyi-cuff, egqoke engalweni phakathi kwe-elbow nehlombe.
Ikhithi yokulinganisa ingcindezi ifaka i-cuff exhunywe yibhubhu iye isibani, lapho umoya upha khona, imanometer esetshenziselwa ukubonisa ukufundwa kwengcindezi kanye noconendoscope ukulalela ukushaya kwenhliziyo.
Izingqapheli zokucindezela kwegazi ezilinganiselayo zihlukile kuhlobo lokuqala engxenyeni yokulinganisa - zinesibuko esikrinini lapho kukhonjiswa khona amanani wegazi lengcindezelo legazi eliphezulu nangaphansi.
Kumadivaysi wokulinganisa ingcindezi othomathikhi kune-cuff kuphela nesibonisi, ngaphandle kwe-bulb.
Inkampani yeBayer kanye nemitha yeglucose Contour TC. Izinzuzo, izindleko
Ukuqala komgomo wokugomela isifo sikashukela kuyindaba yesikhathi. Funda ngocwaningo lwanamuhla kule ndatshana.
Ngingawadla ama-alimondi kashukela? Izinzuzo nokulimala kwama-alimondi
Ukukala umfutho wegazi nge-tonometer ebhaliwe, kufakwa i-cuff engalweni, bese kufakwa ikhanda lekholoni esifundeni se-ulnar cavity. Ngosizo lwethanga, umoya uphahlwe ku-cuff, ngesikhathi sokuvela komoya kubalulekile ukulalela ngokucophelela ukushaya kwenhliziyo futhi lapho kuqala ukushaywa kabili noma kathathu, kubalulekile ukukhumbula inani eliku-dialeter. Lokhu kuzoba yingcindezi ephezulu. Lapho umoya wehla, ukushaya kuzoba okucacile kuze kube yilapho zinyamalala, lapho ukushaya kuphele futhi kuzokhombisa ukubaluleka kwengcindezi ephansi.
Indlela yokulinganisa usebenzisa ama-semi-othomathikhi omfutho wegazi ahlukile ngoba asikho isidingo sokulalela ukushaya kwenhliziyo, isibonisi sizokhombisa ngokuzenzakalela amanani omfutho ophakeme naphansi ngesikhathi esifanele.
Lapho ulinganisa umfutho wegazi nge-othomathikhi yokucindezela kwegazi othomathikhi, udinga kuphela ukubeka i-cuff esandleni sakho bese uvule inkinobho, uhlelo luzodonsa umoya lukhombise amanani wokucindezela.
Okunembile kakhulu kubhekwa njengamadivayisi lapho umuntu elalela ukushaya kwenhliziyo futhi abeke khona inani lomfutho wegazi, kodwa futhi anenkani yawo emuva - ukuphazamiseka kokulinganisa ingcindezi eyedwa.
Ukunquma ngokunembile inani lokucindezela kwegazi, ukukala okukodwa akwanele. Imvamisa ukulinganisa kokuqala kukhombisa umphumela oveziwe wamanga ngenxa yokucindezelwa kwemikhumbi yi-cuff.
Umphumela wokulinganisa ongalungile kungenzeka futhi ube yiphutha lephutha kusisetshenziswa. Kulesi simo, kuyadingeka ukwenza ezinye izilinganiso ze-2-3 futhi uma zifana ngokulandelana, khona-ke isibalo sizosho inani langempela lokucindezela. Uma izinombolo ngemuva kwezilinganiso 2nd ne-3 zihlukile, kufanele kwenziwe ezinye izilinganiso kuze kufike inani elilingana nezilinganiso zangaphambili.
Kuyini i-metabolic syndrome? Lokhu kungabhekwa njengokuqala kwesifo sikashukela?
Izici eziwusizo zama-clove kashukela. Funda kabanzi //saydiabetu.netjipmetody-i-sposoby-lecheniya/narodnye-sredstva/lekarstvennye-rasteniya/gvozdika/
Landelela izinto - yisiphi isidingo sansuku zonke sabo nemithombo yabo eyinhloko
Icala No. 1 Icala No. 2
Esimweni sokuqala, ukucindezela kukalwe izikhathi ezi-3. Ngokuthatha inani eliphakathi kwezilinganiso ezi-3, sithola ingcindezi elingana no-136/8. Esimweni sesibili, lapho kukalwa ingcindezi izikhathi ezi-5, amanani wesilinganiso se-4 nelesi-5 acishe alingane futhi awadluli ku-130 /77 mm Hg. Isibonelo sikhombisa ngokucacile ukubaluleka kwezilinganiso eziningi, kukhombisa ngokunembile ingcindezi yegazi uqobo.